Ngo-2013, izwe lingakabikho umfuziselo kwesizukulwane sesine le Suv Cadillac Escalade. Kulindeleke umkhiqizo omusha, ukuze yokuthengisa elikhula ngokushesha babe nkomoni. Abantu abaningi baye baba abanikazi imoto, futhi ezinye zazo ngemuva kwesikhathi esithile ngemva ukuthengwa steel okuthunyelwe mayelana "Cadillac Escalade" ukubuyekezwa. Abakwazi ngikuxoxele imoto ingcono kakhulu incazelo esemthethweni. Ngakho-ke kubalulekile ukuba sitadishe ngokucophelela eningi kakhulu kubo.
Imodeli esizukulwane sesithathu
Okokuqala, ngithanda ukuba adonsele ukunakekela "Cadillac Escalade 3". Izibuyekezo wabanikazi oshiywe amamodeli ikhiqizwa 2007 kuya ku-2014-th, ongamtshela eziningi.
Ngokuvamile abantu bethi ngokucophelela ngendlela emangalisayo Ukugunda gearshift isigwedlo. Itholakala kwi amasondo ayo, kodwa ezizwa ukusebenzisa umuntu ngamunye peresevshy kusukela umshini lapho ikhanda igiya ingezansi ejwayelekile. Sam isigwedlo emotweni Lihle kakhulu futhi ezincane. Ukuze ukwazi ukuyiphatha, ngisho ukuthatha uhlangothi yesokunene amasondo ayo.
Okuningi obaluleke ngaphezu lula inqubo ye-CPR ukusingatha izinto ezifana ukuthembeka. Lena imoto enhle ngempela. amakhilomitha angaphezu kuka-50,000 uhambo ngempela ushintsho ukubopha pads. A ephelele, ngasendleleni, ezishibhile kakhulu, kokubili American Suv ikilasi okunethezeka. Kuyaqapheleka abantu abaningi beshiya ukubuyekezwa.
"Cadillac Escalade 3" futhi imoto esiwusizo kakhulu. Naphezu ukubukeka Chic futhi ziyabukeka, angababaza usiphathe trailer 3.5 ton, ngaphandle kokulahlekelwa umfutho. Kodwa nokho ngaphakathi it is banzi kakhulu, futhi osebenza sesihlahla.
Nabo bangafunda lukhulu uma sinake kwesokunxele kwesizukulwane sesithathu "Cadillac Escalade" ukubuyekezwa. Abanikazi bazo zonke ujabule emotweni, kodwa kukhona downsides wakhe. Ngenhlanhla, eye yalungiswa ekuthuthukiseni ezizukulwane ezine, okuzoxoxwa olwengeziwe.
Abantu abaningi baye baqaphela kumiswa izingcezu ice phakathi seal umnyango ngesikhathi kweqhwa okukhulu kubanda futhi. Ngenxa yabo, indaba insaliwe kancane. Ngenxa yalokho, amanzi kusukela iminyango front futhi bakhulise iconsa ku endlwaneni eyakhiwe phakathi egeza. Izindlela ezintsha, onjiniyela zazisetshenziswa okuhlala isikhathi eside futhi kanzima, ukuze yokuntuleka wanyamalala. abanikazi uphinde wagxeka ababuthakathaka amandla ukufuthelana Washer Imibhobho esemzimbeni. Esikhathini namakhaza ashubisa umnkantsha , akazange asize. A "abanakekeli" akashongo eqhweni.
Abaningi waqaphela futhi engenangqondo fuel ukuziphatha ezingeni inkomba, kanye ibanga refilling esilandelayo. On onobuhle esizukulwane sesithathu ayengakwenza isikhashana ukukhombisa ithangi cishe ezingenalutho, kanti elandelayo - cishe ingxenye egcwele.
Kuyangabazeka wasebenza futhi lokushisa inzwa, ngezikhathi elikhiphe ukwehluleka namaphutha. Kuyefana nasendleleni computer ugibelile. On onobuhle ekhiqizwa ngaphambi 2014, lizokhipha isixwayiso mayelana impilo ukumiswa yokuqinisekisa, kuyilapho futha isebenza kahle futhi dampers lonke. Futhi ngisho off-road kuleyo minyaka kwakungekho isondo ukujula ukulungiswa USB / CD-nezixhumi ohlelweni audio.
Awu, manje ungaqala obzorka izinguqulo. 6,2-litre "eziyisishiyagalombili" ukhiqiza 409 amahhashi - yilokho Phiko ngaphansi hood we oyisizukulwane sesine imodeli Suv "Cadillac Escalade". Amazwana kwesokunxele ngalokhu imoto abanikazi langempela bayakwazi ukusho ukuthi injini empeleni.
injini Special, ifakwe umsebenzi off 4 amasilinda. Lolu khetho, ngokusho abanikazi, kwabangela uma imoto iya ukugudla. Izinzuzo idolobha kuwo kancane, kodwa uma ushayela ku ukusetshenziswa onguthelawayeka kuyehla ngempela.
Izindleko motor akakwazi ngokuthi. Ukusetshenziswa mode muzi azungeze 24-25 amalitha 95 octane uphethiloli (kuhlanganise amakepisi, ukusebenza ekulawuleni isimo sezulu, ezemidlalo isitayela ukushayela nokunye. D.). Ngu Road iyunithi ibusa kancane izikhathi ezimbili.
Kodwa izindleko uphethiloli, abanikazi abathi kukhona okuvelayo enikeza imoto. "Amakhulu" ifinyelela ngemva 6.5 imizuzwana ngemuva kokuqala, kuyilapho ecindezela namafutha wazizwa ukusheshisa nje bebangalasa. Futhi lokhu naphezu kweqiniso lokuthi isisindo lomgwaqo we imoto ingaphezu 2.5 amathani. I ngesivinini esiphezulu, ngenhlanhla kuyinto 180 km / h.
Akuyona into engavamile iyona "Cadillac Escalade" ku igesi. Izibuyekezo okukhulunywe ngaye ngenhla, esisiza ukuba siqonde ukuthi lokhu imoto akuyona ukonga kakhulu. Yiqiniso, i-mass enjalo, futhi isimo isigaba off-road 25 amalitha uphethiloli - kuyinsakavukela. Kodwa abaningi bathambekele ukunciphisa ukusetshenziswa futhi ufake imishini igesi.
Lo mbono ngokwawo ngempela kuthethelelwe. Ukufakwa kubiza ruble mayelana 35,000, futhi ingabhekana wena ngosuku olufanayo. Zonke izindleko imali ayikweletayo azungeze 25 000 amakhilomitha. Yilokho kuphela uphethiloli kanye ngenyanga okufanele idlule for 20-30 amakhilomitha. Kunconywa ochwepheshe futhi abanikazi langempela.
Futhi njengoba kuhlangene umjikelezo ukugeleza rate kuyinto 20 amalitha. Lapho ushayela emgwaqweni omkhulu at amakhilomitha 100 kuthatha cishe 15 amalitha. Ngakho ukufakwa HBO, ungakwazi kuphela ukunqoba. omunye lokususa kuphela - esikhululekile isondo lapho behamba amabanga amade (lapho kungenzeka singaba usizo kabi) kufanele kwenziwe esikhathini gumbi.
Le nguqulo Suv Kukhona. Siyini "Cadillac Escalade" -gibrid? Izibuyekezo unike amandla abanikazi lokuba siliqonde.
Ngakho, lo imodeli ifakwe ukufakwa 337-eqinile likaphethiloli 8 tsinidrovogo iyunithi kanye izinjini ezimbili kagesi. Lo mkhawulo isivinini imoto - 170 km / h. Ukuze "Abangamakhulu" ke ohlakaziwe ngoba 8,4 imizuzwana, futhi sisebenzisa amalitha mayelana 11 emjikelezweni kuhlanganiswe.
Kwesobunxele mayelana "Cadillac Escalade Hybrid" Izibuyekezo esisiza ukuba siqonde isimiso wokusebenza. Sezimoto imoto eshukunyiswa traction kagesi. izinjini ezimbili ukunikeza ukunyakaza onokuthula buthule ngesivinini aphansi. Kodwa uma umshayeli enquma Cindezela igesi kwisitezi ke isebenze V8 umsebenzi. Lapho braking, le izinjini kagesi izosebenza njengetintfo.
It wasebenzelana ngayo nabantu abaningi abathenge "Cadillac Escalade". Chip Tuning (lwempendulo lusisiza uqinisekise lesi) kakhulu kwandisa amandla injini nezici lobuchwepheshe umshini. Uma ochwepheshe ukusebenza, sizokwazi ukuletha injini kuze kufinyelele 445 "amahhashi". Lokhu kuzokhulisa ngesivinini esiphezulu 191 km / h futhi ukusheshisa ukuba "amakhulukhulu" Wawuthatha imizuzwana okungenani 0.6. Futhi lokhu akuyona umkhawulo. Ungakwazi unamathisele lemali ezinkudlwana bese uthole imiphumela ngisho esithé ukuphakama.
Abantu ababeka oda chip Tuning, benelisekile - imoto iba yezemidlalo nakakhulu futhi iyaguquka. Lokhu kubalulekile ikakhulukazi labo abangakwazi ukucabanga ukuphila ngaphandle izinga eliphezulu.
It lugujwa ukunaka kwabantu, kusale mayelana "Cadillac Escalade" ukubuyekezwa. Lo mshini ayinyakazi nokungangabazi kuleli dolobha futhi emgwaqeni omkhulu. Njengoba ezinjengokungcoliswa ithrekhi futhi Wobble ngenxa isiphepho, abanikazi awabhekani. nezwi "screwed" in the Suv iphendula. Futhi njengoba ngesivinini omkhulu, kanye ezindaweni zasemadolobheni, ezinkantolo.
Nokho, njengoba abashayeli qaphelani, lokhu Suv "akawuthandi" isivinini uhlevane. Awakwazi washelela ngokusebenzisa, okumenza okwehlisa. On "Cadillac" semfene akudingeki ukuba kudlule kancane, ngesivinini esiphansi. Kungenjalo adala beat Frisky ucime kolunye uhlangothi. Nakuba, kukhona omunye ehilelekile ezithakazelisayo. Racks ku-SUV akuyona evamile, kodwa ukugcwaliswa kagesi. Isimo sezimoto ibalwa njalo ngomzuzwana, futhi ngesisekelo cwaningo ezinjalo Racks ngokwabo kuyalungiswa nobulukhuni eyamukelekayo kakhulu.
Futhi ogibele ngempela ukhululekile. Urban ezinhle asphalt imoto futhi akazange Zindiza njengokhozi indiza. Ngisho sengiprofethile kuthule amasondo akuyona ezwakalayo.
Iphinde waphawula eziningi ukunakwa, beshiya reviews. Entsha "Cadillac Escalade" ifakwe konke ungase ungadinga. Ngisho abashayeli elitheni ziyaneliswa.
imishini Eyisisekelo obizwa ngokuthi elibizayo. Kuhlanganisa ithuluzi panel electronic nge isibonisi-12 intshi, iskrini kwelivi ukuthi ubonisa on the front ingilazi umshayeli ukwaziswa okubalulekile (navigation imiyalo, isivinini kanye nokunye. D.), Bose izikhulumi nge 16 Izipikha nezilungiselelo azungeze umsindo, kanye nokuzijabulisa uphawu kanye nabezindaba uhlelo Cadillac Umuzwa womsebenzisi nge itilosi (Emabalazweni Russia naseYurophu ayatholakala).
Nokho, uyakubona ke inezici okuningi. Kukhona FM / AM-stereo, ulwazi umbala-8 intshi isibonisi inzwa, ethintekayo impendulo sici nezixhumi SD-ikhadi, USB ne njengomthombo wangaphandle umsindo, ukuqashelwa izwi, i-Bluetooth nokuningi.
It kudingeka siyinake ngokukhethekile futhi umshayeli ulwazi isikhungo nge screen 14.5-isentimitha. Abanikazi ajabulela naye. Uhlelo ubonisa Isibonisi esikhanyayo imiyalezo ukwaziswa okubalulekile, nsuku zonke mileage imoto, odometer, idatha Cruising, ukusetshenziswa, ngisho uwoyela eside imoto. On futhi ubonisa isaziso mayelana ezingeni eliphansi anti-nqabela akuyona ngashona ezizibeni, ingcindezi ongaphakeme uwoyela nokunye okuningi. Siyabonga bonke ohlwini, kanye nabanye unmentioned izici, abashayeli benomuzwa wokuthi lena akuyona umshini, kodwa umuntu ohlakaniphe ngempela yokufakelwa.
Kuyatholakala ku-imoto "Cadillac Escalade" Izibuyekezo esisiza ukuba siqonde ukuthi lokhu izinzuzo umshini isisindo. Ezinye zazo kukhuluma kaningi kakhulu.
Izihlalo, isibonelo. Ziyakwazi emangalisayo ukhululekile, ifakwe inqwaba izilungiselelo nokusekelwa ezilingene lumbar isiguqo hhayi nje ulele, futhi enye, futhi ihamba phezulu naphansi.
Engine umsindo futhi ezihlobene eziningi eziwusizo. Ungalalela amahora, kokubili ngaphandle nangaphakathi. Kwimodi ejwayelekile operation, umshayeli awukwazi ukuzwa, kodwa ukushesha wezwa kumnandi umsindo kuphelelwa umfutho, jikisa ukubhonga zasendle, uma yeka ingilazi. Abashayeli bazi ezibalulekile indlela ehilelekile obonakala ungelutho ezinjalo.
Futhi kule imodeli okusezingeni eliphezulu zihlalo isikhundla. Lokhu kusho ukuthi umshayeli ithola esiphezulu kwezinto esizibonayo futhi uyakwazi ukubala kusengaphambili isimo sezimoto.
Ngaphezu kwalokho, kudeshibhodi izibani eziningi ezimnandi kusebenze lapho kuhlwa. Dash Eme ikhanyisa ne nice, hhayi ukusika iso umlilo blue okwesibhakabhaka, futhi ukukhanya kungase kushintshwe njengoba oyifunayo.
Abantu ababeka ungumnikazi wale imoto, bathi - kuwukuthi "Cadillac" ezingeni eliphezulu kakhulu. Ezokuphepha bunikezwa khona izinhlelo ezihlukahlukene futhi ongakhetha, ingasaphathwa-ABS evamile, ESP, imicamelo / kwesihenqo airbag nokunye.
Kukhona amaphasela "ukuqaphela umshayeli", isixwayiso okwesula kwindlela ehlasela, cishe kungenzeka ukushayisana phambi, ukubukeka lezinto izingxenye "abayizimpumputhe, 'kwesokunxele / kwesokudla. Kukhona izilungiselelo inkumbulo iphakethe abashayeli emibili.
Ngaphezu kwalokho, kukhona Parktronic (front futhi bakhulise), somoya laminated, iyavuleka ultraviolet ray, anti-theft uhlelo ne alamu bese ukuphazamisa nemithi. Iphakethe "Premium" yengezwe ukulawula radar cruise, wokubuka inketho isiyingi ne amakhamera ezine, unyathela amabhuleki umsebenzi eziphuthumayo, amabhande asebenzayo ngoku-tensioners nokuningi. Nokho, futhi lokhu kwanele ukuba baqonde indlela imoto singamethemba futhi iphephile.
I ukupholisa uhlelo Vaz-2107: imanyuwali yomsebenzisi, ukulungisa
Dvigatel- "esigidini" - kusho ukuthini? On imishini abiza?
"Dormiplant": yokusetshenziswa, nozakwabo yangempela